Mwari Wedu Mutsvene: “Mutsvene, Mutsvene, Mutsvene, Iye Jehovha” (Isaya 6) | Swedera Pedyo
1, 2. Muprofita Isaya akaratidzwei, uye zvinotidzidzisei pamusoro paJehovha?
ISAYA akashamiswa nezvaakaona pamberi pake—zvaakaratidzwa naMwari. Zvaiita sezvinhu chaizvo! Isaya akazonyora kuti aka‘ona Jehovha’ chaiye ari pachigaro Chake choUmambo chakakwirira. Nguo refu yaJehovha yakazadza temberi huru yaiva muJerusarema.—Isaya 6:1, 2.
2 Isaya akashamiswawo nezvaakanzwa—kuimba kwaiva nesimba kwazvo zvokuti kwakazunungusa temberi kusvika kunheyo yayo chaiko. Rwiyo rwacho rwakanga ruchibva kumaserafi, zvisikwa zvomudzimu zvine nzvimbo yakakwirira zvikuru. Kuwirirana kwawo kune simba kwakaunga nemashoko aya okuremekedza: “Mutsvene, mutsvene, mutsvene, iye Jehovha wehondo; nyika yose izere nokubwinya kwake.” (Isaya 6:3, 4) Kuimba shoko rokuti “Mutsvene” katatu kwakarisimbisa chaizvo, uye zvakadaro nenzira yakakodzera, nokuti Jehovha mutsvene zvikuru chaizvo. (Zvakazarurwa 4:8) Utsvene hwaJehovha hunosimbiswa muBhaibheri rose. Mazana endima dzeBhaibheri anobatanidza zita rake nemashoko okuti “mutsvene” uye “utsvene.”
3. Kusanzwisisa utsvene hwaJehovha kunoita sei kuti vamwe vabve kwaari pane kuti vaswedere pedyo naye?
3 Saka sezviri pachena, chimwe chezvinhu zvinokosha icho Jehovha anoda kuti tinzwisise nezvake ndechokuti mutsvene. Asi, pfungwa iyoyo inoita kuti vazhinji nhasi vatyire kure. Vamwe vanokanganisa nokufunga kuti utsvene kuzviidza akarurama kana kuti kuzviita mutsvene. Vanhu vanonetseka nokuzvitarisira pasi vangawana utsvene hwaMwari huchizezesa pane kukwezva. Vangatya kuti havangazombosviki pakuva vakakodzera kuswedera pedyo naMwari mutsvene uyu. Nokudaro, zvinoita kuti vamwe vabve kuna Mwari nemhaka youtsvene hwake. Izvozvo zvinosiririsa, nokuti utsvene hwaMwari chaizvoizvo chikonzero chakasimba chokuswedera pedyo naye. Nei? Tisati tapindura mubvunzo iwoyo, ngatimbotaura kuti utsvene hwechokwadi chii.
4, 5. (a) Utsvene hunorevei, uye hahurevi chii? (b) Munzirai mbiri dzinokosha umo Jehovha “akaparadzana”?
4 Kuti Mwari mutsvene hakurevi kuti anonyanyisa kuzviita akarurama, anozvikudza, kana kuti anozvidza vamwe. Kupesana naizvozvo, anotovenga vanhu vakadaro. (Zvirevo 16:5; Jakobho 4:6) Naizvozvo, shoko rokuti “mutsvene” rinorevei chaizvo? MuchiHebheru chomuBhaibheri, shoko racho rinobva pashoko rinoreva “kuparadzaniswa.” Mukunamata, “utsvene” hunoshanda kuchinhu chakaparadzaniswa kuti chisangoshandiswa zvose zvose, kana kuti chinoyereswa. Utsvene hunorevawo kuchena. Shoko iri rinoshanda sei kuna Jehovha? Zvinoreva here kuti “akaparadzaniswa” nevanhu vasina kukwana, kuti ari kure zvikuru nesu?
5 Kwete. So“Mutsvene waIsraeri,” Jehovha akazvirondedzera achiti aigara “pakati” pevanhu vake, kunyange zvazvo vakanga vari vatadzi. (Isaya 12:6; Hosea 11:9) Saka utsvene hwake hahumuiti kuti ave kure. Saka “akaparadzaniswa” sei zvino? Munzira mbiri dzinokosha. Kutanga, akaparadzana nezvinhu zvose zvakasikwa pakuti iye oga ndiye Wokumusorosoro. Kuchena kwake kwakakwana uye hakugumi. (Pisarema 40:5; 83:18) Chechipiri, Jehovha akaparadzana zvakakwana nechivi chorudzi rwose, uye iyoyo ipfungwa inonyaradza. Nei?
6. Nei tichigona kuwana nyaradzo mukuparadzana nechivi kwakakwana kwaJehovha?
6 Tiri kurarama munyika umo utsvene hwechokwadi husiri nyore kuwana. Zvinhu zvose zvine chokuita nevanhu vakaparadzana naMwari zvakasvibiswa neimwe nzira, zvakasvibiswa nechivi nokusakwana. Tose tinofanira kurwa nechivi chiri mukati medu. Uye tose tiri mungozi yokukurirwa nechivi kana tikarega kuramba takarinda. (VaRoma 7:15-25; 1 VaKorinde 10:12) Jehovha haasi mungozi yakadaro. Zvaari kure kure nezvivi, hazvizomboitiki kuti achazombosvibiswa chero nechivi chidukuduku. Izvi zvinosimbisa kufunga kwedu kwokuti Jehovha ndiye Baba vakanaka, nokuti zvinoreva kuti akavimbika zvakakwana. Kusiyana nemamwe madzibaba evanhu mazhinji, Jehovha haazomboiti zvouori, zvakaipa, kana kuti zvisina kufanira. Utsvene hwake hunoita kuti chero chinhu chakadaro chive chisingabviri. Jehovha pane dzimwe nguva akatopika mhiko noutsvene hwake, nokuti hapana chimwe chingava chakavimbika kuhupfuura. (Amosi 4:2) Izvozvo hazvikurudziri here?
7. Nei zvichigona kutaurwa kuti utsvene huri mukati maJehovha?
7 Utsvene huri mukati maJehovha. Izvozvo zvinorevei? Kungopa somuenzaniso: Funga nezvemashoko okuti “munhu” uye “kusakwana.” Haungagoni kurondedzera rimwe racho usingafungi rimwe racho. Kusakwana kwakazara matiri uye kunoonekwa muzvinhu zvose zvatinoita. Zvino funga nezvemamwe mashoko maviri akasiyana zvachose—“Jehovha” uye “utsvene.” Utsvene hwakazara muna Jehovha. Zvinhu zvake zvose zvakachena uye zvakarurama. Hatingagoni kusvika pakuziva Jehovha sezvaari chaizvo tisati tanzwisisa shoko rinokosha iri—“utsvene.”
8, 9. Chii chinoratidza kuti Jehovha anobatsira vanhu vasina kukwana kuti vave vatsvene kwete hazvo zvakakwana?
8 Sezvo Jehovha ari mutsvene, zvinogona kutaurwa kwazvo kuti ndiye tsime routsvene hwose. Haachengeti utsvene hunokosha uhwu nenzira youdyire; anohupa vamwe, uye anopa hwakawanda. Chokwadi, Mwari paakataura naMosesi achishandisa ngirozi pagwenzi raipfuta, kunyange nzvimbo yakapoteredza yakava tsvene nemhaka yokuva kwayo naJehovha!—Eksodho 3:5.
9 Vanhu vasina kukwana vanogona kuva vatsvene here vachibatsirwa naJehovha? Hungu, kwete hazvo zvakakwana. Mwari akapa vanhu vake vaIsraeri tariro yokuva “rudzi rutsvene.” (Eksodho 19:6) Akakomborera rudzi irworwo nenzira yokunamata yaiva tsvene uye yakachena. Naizvozvo utsvene inyaya inotaurwa yataurwazve muMutemo waMosesi. Zvaitoitika ndezvokuti mupristi mukuru aipfeka chirete chendarama mberi kwengowani yake, apo vanhu vose vaigona kuchiona chichipenya muchiedza. Mashoko akanga akanyorwa pachiri aiti: “Utsvene ndohwaJehovha.” (Eksodho 28:36, NW) Naizvozvo mwero wokuchena wepamusoro ndiwo waizosiyanisa kunamata kwavo uyewo mararamiro avo. Jehovha akavaudza kuti: “Ivai vatsvene, nokuti ini Jehovha Mwari wenyu ndiri mutsvene.” (Revhitiko 19:2) Chero bedzi vaIsraeri vaiteerera zano raMwari sezvinobvira kuvanhu vasina kukwana, vaiva vatsvene kwete hazvo zvakakwana.
10. Pamusoro poutsvene, kupesana kupi kwaivapo pakati paIsraeri wekare nemarudzi akapoteredza?
10 Uku kusimbiswa kwaiitwa utsvene kwakanga kwakapesana zvikuru nokunamata kwemarudzi akanga akapoteredza Israeri. Marudzi echihedheni iwayo ainamata vanamwari venhema uye vounyengeri, vanamwari vaida zvechisimba, kukara, uye unzenza. Vakanga vasiri vatsvene chero nepaduku pose. Kunamata vanamwari vakadaro kwaiita kuti vanhu vasava vatsvene. Nokudaro, Jehovha akanyevera vashumiri vake kuti varambe vakaparadzana nevanamati vechihedheni nemanamatiro avo akasvibiswa.—Revhitiko 18:24-28; 1 Madzimambo 11:1, 2.
11. Utsvene hwesangano raJehovha rokudenga hunoonekwa sei (a) mungirozi? (b) mumaserafi? (c) muna Jesu?
11 Parwakanga ruchiita zvakanakisisa, rudzi rwaJehovha rwakasarudzwa rwaIsraeri wekare rwaigona kupa mufananidzo muduku chete woutsvene hwesangano raMwari rokudenga. Mamiriyoni ezvisikwa zvomudzimu zvinoshumira Mwari nokuvimbika anonzi “makumi ezviuru ake matsvene.” (Dheuteronomio 33:2; Judha 14) Zvinonyatsoratidza runako rwakajeka, rwakachena rwoutsvene hwaMwari. Uye yeuka maserafi ayo Isaya akaona pane zvaakaratidzwa. Mashoko orwiyo rwawo anoratidza kuti izvi zvisikwa zvomudzimu zvine simba zvinoita basa rinokosha pakuzivisa utsvene hwaJehovha kuzvakasikwa zvose. Zvisinei, chisikwa chomudzimu chimwe chiri pamusoro pezvose izvi—Mwanakomana akaberekwa ari mumwe oga waMwari. Jesu ndiye mufananidzo mukuru woutsvene hwaJehovha. Nenzira yakakodzera, anonzi “Mutsvene waMwari.”—Johani 6:68, 69.
Zita Dzvene, Mudzimu Mutsvene
12, 13. (a) Nei zita raMwari richirondedzerwa nenzira yakakodzera sedzvene? (b) Nei zita raMwari richifanira kutsveneswa?
12 Zvakadini nezita raMwari pachake? Sezvinoratidzwa muchitsauko chokutanga, zita iroro harisi rokungoremekedza chete kana kuti chiratidzo. Rinomirira Jehovha Mwari, richibatanidza zvose zvaari. Naizvozvo Bhaibheri rinotiudza kuti “une zita rinonzi Dzvene.” (Isaya 57:15) Mumutemo waMosesi munhu aisvibisa zita raMwari aitongerwa rufu. (Revhitiko 24:16) Uye cherechedza kuti chii icho Jesu akaisa munzvimbo yokutanga mumunyengetero: “Baba vedu vari kumatenga, zita renyu ngaritsveneswe.” (Mateu 6:9) Kutsvenesa chimwe chinhu zvinoreva kuchitsaura sechinoyera uye kuchikudza, kuchikwidziridza sechitsvene. Asi nei chimwe chinhu chakachena sezita raMwari pachake chichifanira kutsveneswa?
13 Zita raMwari dzvene rakasvibiswa nenhema nokuchera. MuEdheni, Satani akareva nhema pamusoro paJehovha ndokutaura kuti Jehovha ndiChangamire asina ruramisiro. (Genesi 3:1-5) Kubva ipapo, Satani—mutongi wenyika ino isina utsvene—akava nechokwadi chokuti nhema pamusoro paMwari dzinowanda. (Johani 8:44; 12:31; Zvakazarurwa 12:9) Zvitendero zvinotaura nezvaMwari seanoshandisa simba rake zvisingadzorwi, ari kure, kana kuti ane utsinye. Vanoti anovatsigira muhondo dzavo dzokufarira kudeura ropa. Mabasa okusika anoshamisa aMwari anonzi akangoitika oga, kana kuti akauya nokushanduka-shanduka. Hungu zita raMwari rakasvibiswa zvakasimba. Rinofanira kutsveneswa; mbiri yaro yakakodzera inofanira kudzorerwa. Tinoshuva kutsveneswa kwezita rake nokurevererwa kwouchangamire hwake, uye tinofarira kuwana chero chatingaita muchinangwa ichocho chinokosha.
14. Nei mudzimu waMwari uchinzi mutsvene, uye nei kumhura mudzimu mutsvene iri mhosva yakakomba zvikuru?
14 Pane chimwe chinhuzve chakabatana naJehovha zvikuru chinenge chinongogara chichidanwa kuti chitsvene—mudzimu wake, kana kuti simba rinobata basa. (Genesi 1:2) Jehovha anoshandisa simba risingakundiki iri kuita zvinangwa zvake. Zvose izvo Mwari anoita, anozviita nenzira tsvene uye yakachena, naizvozvo simba rake rinoita basa rinonzi nenzira yakakodzera mudzimu mutsvene, kana kuti mudzimu woutsvene. (Ruka 11:13; VaRoma 1:4) Kumhura mudzimu mutsvene uko kunobatanidza kuita nemaune zvinorwisana nezvinangwa zvaJehovha, kunoreva chivi chisingakanganwirwi.—Mako 3:29.
Chinoita Kuti Utsvene hwaJehovha Hutiswededze Kwaari
15. Nei kutya Mwari kuri kuita kwakakodzera pamusoro poutsvene hwaJehovha, uye kutya ikoko kunobatanidzei?
15 Saka hazvina kuoma kuona nei Bhaibheri richibatanidza utsvene hwaMwari nokutya Mwari kwevanhu. Somuenzaniso, Pisarema 99:3 rinoti: “Ngavarumbidze zita renyu guru rinotyisa; ndiye Mutsvene.” Zvisinei, kutya uku hakusi kutya kukuvadzwa. Asi, kutya kwokuremekedza kunobva pamwoyo, kuremekedza kukuru. Zvakakodzera kunzwa saizvozvo, sezvo utsvene hwaMwari huri hukuru zvikuru kutipfuura. Hwakachena zvakajeka, hunobwinya. Kunyange zvakadaro, hahufaniri kutiita kuti tityire kure. Kusiyana naizvozvo, kuona zvakanaka utsvene hwaMwari kuchatiswededza pedyo naye. Nei?
Sezvo runako ruchitikwezva, ndizvo zvinofanira kuitawo utsvene
16. (a) Utsvene hunobatanidzwa norunako sei? Ipa muenzaniso. (b) Kurondedzerwa kwezvakaonekwa zvaJehovha kunosimbisa sei kuchena uye chiedza?
16 Kutanga, Bhaibheri rinobatanidza utsvene norunako. Pana Isaya 63:15, (NW) denga rinorondedzerwa se“nzvimbo [yaMwari] yokugara yakakwirira youtsvene norunako.” Runako runotikwezva. Somuenzaniso, tarira mufananidzo uri papeji 33. Haunzwi uchida kuenda panzvimbo iyoyo here? Chii chinoita kuti ive inokwezva kudaro? Ona kuti mvura yacho inoratidza kuti yakachena sei. Kunyange mhepo inofanira kuva yakachena, nokuti denga racho rine ruvara rwebhuruu uye chiedza chinoita sechiri kuvaima. Zvino, kudai zvauri kuona izvi zvaizochinjwa—rukova rwozadzwa nemarara, miti nematombo zvakanyorwa-nyorwa, mhepo yakasvibiswa noutsi—taisazokwezvwa narwo; taizosemburwa. Tinongoberekwa tichibatanidza runako norucheno, uye chiedza. Mashoko mamwe chete aya anogona kushandiswa kurondedzera utsvene hwaJehovha. Ndosaka kurondedzerwa kwaJehovha muzvakaratidzwa zviya kuchitifadza! Runopenya nechiedza, runoteya meso semabwe anokosha, runobwinya somoto kana kuti simbi yakachena uye yakajeka padzose—ndizvo zvakaita runako rwaMwari wedu mutsvene.—Ezekieri 1:25-28; Zvakazarurwa 4:2, 3.
17, 18. (a) Isaya pakutanga akanzwa sei nezvaakaona? (b) Jehovha akashandisa sei serafi kunyaradza Isaya, uye zvakaitwa neSerafi zvairevei?
17 Zvisinei, utsvene hwaMwari hunofanira kutiita kuti tinzwe tiri vaduku here kana tichizvienzanisa? Chokwadi, mhinduro ndeyokuti hungu. Pamusoro pazvo, tiri vaduku kuna Jehovha—uye kutaura kudaro hakupedzeredzi zvazviri chaizvo. Kuziva izvozvo kunofanira kutiparadzanisa naye here? Funga kuti Isaya akanzwa sei maserafi achizivisa utsvene hwaJehovha. “Ipapo ndikati: Ndine nhamo! Nokuti ndoparara, nokuti ndiri munhu wemiromo ine tsvina, ndigere pakati pavanhu vemiromo ine tsvina; nokuti meso angu akaona Mambo, Jehovha wehondo.” (Isaya 6:5) Hungu, utsvene husingaperi hwaJehovha hwakayeuchidza Isaya kuti akanga ane zvivi uye asina kukwana. Pakutanga munhu akatendeka iyeye zvakamunetsa. Asi Jehovha haana kumusiya akadaro.
18 Serafi rakakurumidza kunyaradza muprofita. Sei? Mudzimu wacho une simba wakabhururukira paatari, ndokutora zimbe romoto ipapo, ndokuguma miromo yaIsaya naro. Izvozvo zvingaratidza sezvinotowedzera marwadzo pane kunyaradza. Zvisinei, yeuka kuti izvi zvinhu zvaakaratidzwa, zvine zvazvinofananidzira zvinokosha. Isaya, muJudha akatendeka, ainyatsoziva kuti zvibayiro zvaipirwa mazuva ose paatari yepatemberi kuyananisa zvivi. Uye serafi norudo rakayeuchidza muprofita kuti kunyange zvazvo akanga asina kukwana zvechokwadi, ane “miromo ine tsvina,” aigona kuva nokumira kwakachena pamberi paMwari. * Jehovha akanga achida kuona munhu asina kukwana, anotadza somutsvene—kwete zvakakwana hazvo.—Isaya 6:6, 7.
19 Zvinobvira sei kuti tive vatsvene kwete hazvo zvakakwana, tisina kukwana sezvatiri?
19 Izvozvo zvinoitikawo nhasi. Zvibayiro zvose zvaipiwa paatari muJerusarema zvaingova mumvuri wechimwe chinhu chikuru—chibayiro chimwe chakakwana, chakapiwa naJesu Kristu muna 33 C.E. (VaHebheru 9:11-14) Kana tikapfidza zvivi zvedu zvechokwadi, tikagadzirisa zvatinenge takanganisa, uye tikatenda chibayiro ichocho tinokanganwirwa. (1 Johani 2:2) Nesuwo tinogona kuva nokumira kwakachena pamberi paMwari. Naizvozvo muapostora Petro anotiyeuchidza kuti: “Zvakanyorwa kuti: ‘Munofanira kuva vatsvene, nokuti ini ndiri mutsvene.’” (1 Petro 1:16) Ona kuti Jehovha haana kuti tinofanira kuva vatsvene sezvaakaita. Haatarisiri zvisingabviri kwatiri. (Pisarema 103:13, 14) Asi, Jehovha anotiudza kuti tive vatsvene nokuti iye mutsvene. “Sevana vanodikanwa,” tinotsvaka kumutevedzera nepose patinogona napo sevanhu vasina kukwana. (VaEfeso 5:1) Naizvozvo kuva vatsvene chinhu chinoramba chichingoitwa. Sezvatinokura mumudzimu, tinoshandira ku“kwanisa utsvene” zuva nezuva.—2 VaKorinde 7:1.
20. (a) Nei zvichikosha kunzwisisa kuti tinogona kuva vakachena mumeso aMwari wedu mutsvene? (b) Isaya akanzwa sei paakaziva kuti zvivi zvake zvakanga zvakanganwirwa?
20 Jehovha, anoda zvakarurama uye zvakachena. Anovenga chivi. (Habhakuki 1:13) Asi haativengi. Chero bedzi tichiona chivi sezvaanoita—tichivenga zvakaipa, tichida zvakanaka—uye tichiedza kutevera tsoka dzakakwana dzaJesu Kristu, Jehovha anokanganwira zvivi zvedu. (Amosi 5:15; 1 Petro 2:21) Patinonzwisisa kuti tinogona kuva vakachena mumeso aMwari wedu mutsvene, zvinofadza mwoyo yedu kwazvo. Yeuka, utsvene hwaJehovha pakutanga hwakayeuchidza Isaya nezvokusachena kwake. Akachema achiti: “Ndine nhamo!” Asi paakangonzwisisa kuti zvivi zvake zvakanga zvakanganwirwa, akachinja. Jehovha paakakumbira aida kuzvipira kuita basa, Isaya akapindura nokukurumidza, kunyange zvazvo akanga asingazivi zvaida kuitwa zvacho. Akati: “Ndiri pano ini, nditumei.”—Isaya 6:5-8.
21. Zvikonzeroi zvatinazvo zvokuva nechivimbo chokuti tinogona kuzvigadziridza kuti tive vatsvene?
21 Takaitwa nomufananidzo waMwari mutsvene, takaberekwa tine tsika uye tichikwanisa kunamata. (Genesi 1:26) Tose tine simba rokuva vatsvene. Sezvatinoramba tichizvigadziridza kuti tive noutsvene, Jehovha anofara kubatsira. Mukuita kudaro, ticharamba tichiswedera pedyo naMwari wedu mutsvene. Uyezve, sezvatichakurukura nezvaJehovha muzvitsauko zvinotevera, tichaona kuti kune zvikonzero zvizhinji zvakasimba zvokuswedera pedyo naye!
^ ndima 18 Mashoko okuti “miromo ine tsvina” akakodzera, nokuti miromo inowanzoshandiswa muBhaibheri nenzira yokufananidzira kumirira kutaura kana kuti mutauro. Muvanhu vose vasina kukwana, zvivi zvizhinji zvinobva mumashandisiro atinoita muromo.—Zvirevo 10:19; Jakobho 3:2, 6.
Revhitiko 19:1-18 Kana mufambiro wedu uchizova mutsvene, ndedzipi dzimwe nheyo dzatinofanira kushandisa?
Dheuteronomio 23:9-14 Kuchena kwomunhu kunowirirana sei noutsvene? Izvi zvinofanira kuita kuti tipfeke nokuzvishongedza sei isu nomusha wedu?
VaRoma 6:12-23; 12:1-3 Sezvatinoedza kuva vatsvene, tinofanira kuona sei chivi nezvinotikanganisa zviri munyika ino?
VaHebheru 12:12-17 Tingatsvaka sei kutsveneswa, kana kuti utsvene?